झण्डा जल्दा उग्र बन्नेहरुलाई बिनम्र पूर्वक अनुरोध छ की इतिहासलाई पनि हेरौं । - MONGOL KHABAR
झण्डा जल्दा उग्र बन्नेहरुलाई बिनम्र पूर्वक अनुरोध छ की इतिहासलाई पनि हेरौं ।
काठमाडौ । हिन्दु संघका युवाहरुले “नेपालको झण्डा बिश्वका हिन्दु समेटिएको” कारण झण्डा जलाउनेलाई कार्वाही गर्छौ भनेर प्रतिक्रिया दिएका रहेछन् । कसैले आफ्नो कुण्ठा रोक्न सकेन । सजाय दिने निकायले पक्कै गर्ला तर हिन्दु संघ संस्था पो ती निकाय भन्दा अघि देखियो ।
यदि यति शक्तिशाली, त्यतिको देशको माया छ भने त्यो महाकाली, टनकपुर, कोशी, गण्डकी बेचिखानेलाई कार्वाही गर । मान्छे मार्ने हत्याराहरुलाई कार्वाही गर । मान्छे मार्ने फूलमाला लगाएर सलामी दिदा चु नवोल्ने, भ्रष्टाचार गरेर देश खोक्रो बनाउदा मुकदर्शक बन्ने, देशलाई केक सम्झेर काटी खादा केही नहुने । अनि एउटाले उत्तेजीत भएर झण्डा जलायो भनेर आफै कार्वाही गछौं भन्दै कराउने ? वास्तवमा भिडलाई उत्तेजीत बनाउने कार्य कसले गर्दैछ ? त्यो कुरा बुझ्नु पर्ने भयो । यो भिडमा झण्डा जलाउनेले गल्ती गरेछन रे कार्वाही गर्ने सम्बन्धित निकाय छन् त?
झण्डाको त्यति धेरै माया रहेछ भारतमा कथित नेपालको झण्डा जल्दा केही गर्न नसक्ने हिन्दुवादीहरु एउटा तामाङले झण्डा जलाउदा यति धेरै भाडभैलो मच्चाउनु पर्ने ? म एउटा दृष्टान्ट पेस गर्न चाहन्छु । श्रीनिवास आचार्यलाई गोली हानीएको २०७४ चैत्र २४ गते सञ्चार माध्यमहरुमा आयो । गोली हान्ने मानिस मंगोलीयन अनुहारको थियो भनेर अफवाह फैलाइयो । दुईजना पक्राउ परे । एक जना चौधरी थिए, अर्को अधिकारी थरका बाहुन ।
यी चितवन र नवपरासीका थिए । उनीहरुले प्रहरीलाई बयान दिदा श्रीनिवास आचार्यले हिन्दु धर्म बचाउनको लागि यस्तो गरे गर्न लगाए । हामीलाई श्रीनिवासले सिकाएर यो काम गरेका हौं । त्यस पछि थाहा लाग्यो असली साम्प्रदायिक भड्काउने को रहेछ ? श्रीनिवासले आफ्नो कट्टु खुस्कीएको थाहा पाएपछि नयाँ दिल्ली तिर भाग्न तयार भएछन् । तर २०७५ बैशाख २४ गते पक्राउ परे । त्यसपछि २०७४ चैत्र ८ गते मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन(आर्मी) को नाममा पर्चा छर्ने, हिन्दु गुरुहरु माथी धम्की आयो भन्दै नाटक गर्दै सुरक्षा खतरा भयो सुरक्षा गरि पाउ भन्दै सिंहदरबार पुगेको प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको सबै कुरा नाटक थाहा लाग्यो ।
दुःखको कुरा यत्रो आतंकवादी पक्राउ पर्दा समेत उसलाई धरौटीमा छुटायो । अब हाम्रो पनि प्रश्न छ । सबैलाई कानुन बराबरी लाग्छ की लाग्दैन ? हाम्रो संगठनलाई जोडेर तथानाम मुख छोड्नेहरुको धेरै भिड देखे । मुख छोड्ने होइन समाधान बहस हो । उत्तेजना होइन, त्यसको समाधान खोज्नु पर्छ ।
झण्डा किन जल्यो ?
बिना कारण झण्डा जलेको पक्कै होइन । त्यसको कारण पक्कै छ । भलै ती भाईले उत्तेजनामा आएर झण्डा जलाए । त्यसको भागिदार ती भाई होलान । आफ्नो ठाउँमा छ । तर अब यो बिषय यतिमै सेलाउने होकी यसको बहस पनि हुन्छ ? झण्डा त हिन्दुकै मन्दिरमा थियो । भारतको पृथ्वीराज चौहानले डिजाइन गरेको दुइचुच्चे झण्डाको स्वरुप नै वर्तमान नेपालको झण्डा हो । यो झण्डा हिन्दु सेनापति पृथ्वीराज चौहानले (११७८–११९२) अजमेर(हालको दिल्ली) शासक हुँदा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसपछि पनि ब्रिटिश भारतको समयमा सन् १७८५ मा स्थापना भएको अजयगढ राज्यको अफिसियल झण्डा थियो नपत्याए गुगलमा हेर्नु (Ajaigarh_State) । नेपालमा पृथ्वी नारायण शाहको पाला देखि देखिएको झण्डा पूर्णरुपमा संशोधन गरी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाइएको १९६२ पछि हो । यस बिषयमा मैले लेख यसअघि प्रकाशित गरेको थिए । मेरो भनाई यो दुइ चुच्चे चन्द्र सुर्यमा पहिला ओम अक्षर, हनुमानधोज सूर्य अंकित गरिएको थियो । अहिले चन्द्र सूर्य छ ।
अब यो झण्डाको स्वरुप संशोधन भएर यहाँ सम्म आइपुग्दा बहस थुप्रै भएका छन् । यसै बहसका बीच झण्डा परिवर्तनको माग पनि नयाँ होइन । तत्कालिन समयदेखि उठेको हो । जुन दिन नेपाललाई प्रत्यक्ष हिन्दु राज्य घोषणा गरियो । जुन दिन हिन्दु मन्दिरको धार्मिक झण्डा नेपालको झण्डा भयो त्यसपछि यो यस्ता माग उठेको हो । इतिहास साक्षी हुँदा हँुदै दुनियाकै अनुपम, सुन्दर, कहि नभएको झण्डा भनेर बाख्या शासकले गर्नु र पढाउनु नै दुःखद पक्ष हो ।
मेरो भनाइको तात्पर्य यो होइनकी ती भाइले सहि गरे । सहि गलत छुट्याउने जिम्मा कानुनी बाख्याताको हो । तर एउटा क्रान्तिकारी, बिद्रोही, परिवर्तनकारीले गैरकानुनी भन्दै पक्कै बस्दैन । त्यसैले म यो भन्न चाहन्छुकी यस्ता कुरा वैचारिक ढंगले शासक बर्गले नसुन्दा वा वेवास्ता गर्दाको परिणाम हो भन्ने मेरो निजी बुझाई हो । यसकारण राज्यले समस्याको समाधान तर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । समस्यालाई पाली राखे आगामी दिनमा खराव दिनको आगमन हुने संकेत दिएको छ, यो घट्नाले ।